Al-Shabaab oo weerar isbiimayn ah ku dishay ugu yaraan 15 qof xarunta Amisom ee Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab oo weerar isbiimayn ah ku dishay ugu yaraan 15 qof xarunta Amisom ee Muqdisho
Al-Shabaab oo weerar isbiimayn ah ku dishay ugu yaraan 15 qof xarunta Amisom ee Muqdisho
July 26, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Xarunta Xalane ee Amisom oo qaraxa ka dhacay. Sawirka: BBC Somali.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 19 qof oo ay ku jiraan ciidamo ilaalo ah oo katirsan Amisom iyo Qaramada Midoobay ayaa ku dhintay kadib markii labo gaari oo qarax ah ay ka dhaceen meel u dhow xarunta Amisom ee Xalane oo ku dhow garoonka diyaaradaha Muqdisho, sida ay sheegeen goobjoogayaasha iyo saraakiisha.
Kooxda hubaysan ee al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas.
“Mujaahidiintayadu waxay bartilmaameedsadeen Xalane taasoo xarun u ah ciidamada shisheeye ee dalkayaga Muslimka ah jooga. Waxaanu dilnay tobonaan iyaga ah,” afhayeenka howlgalada al-Shabaab, Cabdulcasiis Abu Muscab ayaa sidaa u sheegay taleefishinka al-Jazeera.
Dhanka kale, afhayeenka dowlada hoose ee Muqdisho, Cabdifataax Cumar Xalane oo la hadlay wakaalada wararka dowlada Soomaaliya ayaa sheegay in bartilmaameedka uu ahaa xarunta Amisom, wuxuuna intaas ku daray in tobonaan ilaalo ah ay ku dhinteen weerarkaas.
Xalane ayaa waxa ay xarun u tahay safaarado badan, Amisom iyo Qaramada Midoobay.
July 27, 2016 Ciidamada nabadsugida NISA oo gaari walxaha qarxa ay saarnaayeen ku qabtay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho
Huge explosion heard near Mogadishu airport
Al-Shabab suicide attack kills at least 15 outside Amisom base in Mogadishu
Saddex qof oo lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dilay kadib markii gaari qarax ah lagu qarxiyay irida hore ee dukaamo kuyaala degmada Wadajir ee Muqdisho maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo ilo-wareedyo [...]
Baran-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo safar ku jooga magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa xariga ka jaray Jaamacadda Maakhir. Madaxweynaha ayaa khudbad uu munaasabadda xarig ka jarka ka jeediyay ku sheegay [...]
Ugu yaraan hal qof oo ku dhintay dooni ganacsi oo ku degtay meel dhowr mayl u jirta dekada Boosaaso
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay dooni ganacsi oo ku degtay meel dhowr mayl u jirta xeebta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, sida uu sheegay sargaal. Agaasimaha wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka Puntland, [...]